တင်ထားသည် ဖေဖော်ဝါရီ 04, 2021 မှ Jeremiah အထဲ၌ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်
သမ္မာကျမ်းဂန်က “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” ဟု ဆို ထား၏ - ရှင်ယောဟန် သြဝါဒစာပထမစောင် ၄း၈။ အနှီကျမ်းပိုဒ်က ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်၏ဟု ပြဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသည် မြော်လင့်ခြင်းအရှင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းလည်းဖြစ်၏ - ရောမ သြဝါဒစာ ၁၅း၁၃။ ထိုသဘောတရားကို ဂါလာတိသြဝါဒစာ၌ ဋီကာ ချဲ့ထား၏။
ဝိညာဉ်ပကတိ၏ အကျိုးမူကား၊ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ - (၂၃) နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်းပေတည်း။ ထိုသို့သောအကျင့် ကို အဘယ်တရားမျှမမြစ်တား။ ဂါလတိသြဝါဒစာ ၅း၂၂၊ ၂၃။
အနှီကျမ်းချက်၏ ညွှန်းချက်များသည် မှင်သက်စရာဖြစ်၏။ တစ်ဒင်္ဂမျှ အနုစိပ် ကြကုန်အံ့။ ထိုထိုသော သီလခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင် မှသာ ရရှိနိုင်မည့် ပါရမီထူးများ ဖြစ်ကြ၏။ အလွယ်ဆိုက ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် အထောက်မရှိလျှင် သင့်၌ ချစ်ခြင်း၊ ပီတိ၊ စရဏ၊ ခန္ဓီ၊ ကရုဏာစသည့် စသည့် ပါရမီထူးများကို မပိုင်နိုင်ပေ။ ငါလည်း ဤပရမတ်အကြောင်း ကန်ဘောင်ဘေး လမ်း လျှောက်ဖြစ်သည့်တစ်နေ့၌ တွေးဖြစ်၏။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်၏။ ထိုအခိုက် မိခင်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏သမီးကို လေထဲလွဲ၍ ဆော့နေသည်ကို ငါမြင်၏။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မြူးတူးနေကြ၏။ အနှီသမီးအပေါ် မာတာမိခင်က ချစ်နိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စေ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်၏။ သမီးငယ်အပေါ် ထိုသို့ချစ်နိုင်ခြင်းသည် သူမ၏ နှလုံးသားမှ အစပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ စေ့ဆော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ထို ချစ်ခြင်းတရားကို မိခင်ထံပေးကာ မိခင်ကလည်း ပြသရန် ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့် မိခင် မေတ္တာအဖြစ် ရုပ်လုံးပေါ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ မိခင်မေတ္တာမဟုတ် ဘုရား၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသာ ဖြစ်ကာ မိခင်အား ကြားခံကာ ပြခြင်းဖြစ်၏။ မိခင်သည် ဘုရား၏ စေ့ဆော် မှုကိုနာခံ၍ ပြခြင်းကြောင့် ထိုမေတ္တာသည် မိခင် ကိုယ်ပိုင်ပမာ ဖြစ်တည်လာခြင်းသာ ဖြစ်၏။ အမှန်ဆိုရသော် မိခင်အချစ်၊ ဇနီးမောင်နှံအချစ် ဟူ၍ မူလတော်မရှိ။ ဤ အကြောင်း ငါတို့နှင့် စိမ်းနိုင်၏။ မည်သို့ဆိုစေ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုသို့သွန်သင်၏။
ငါလည်း သြဝါဒပေးလေတို်င်း ဤသဘောတရားကို မကြာခဏ ချပြသည့်အခါ တရားနာပရိသတ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှ၏။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မျက်နှာပေါက်များမှာ ငါသည် ပုထုဇဉ်တို့၏ သဘာဝကို ထိုးနှက်သည့်ပမာ မြင်ကြကုန်၏။ မင်္ဂလာစင်ထက်၌ အချစ်သီချင်း သန်းပေါင်းများစွာ ဆိုခဲ့၊ သစ္စာများ တိုင်တည်ခဲ့ကြငြား ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မမျှခဲ့ပါလျှင် တစ်ဦးမျှ သစ္စာတည် နိုင်မည်မဟုတ်။ ပဇာကြောင့် အချစ်ပြယ်ပြီး ဘဝပျက်ရပါလိမ့်။ အချစ်သည် ငါတို့ခန္ဓာ အတွင်း၌ရှိ၏ဟု အသိကပ်သူများပင်လျှင် နံနက်အိပ်ရာထသည့်အခါ မိမိအိမ်သူူအပေါ် ချစ်စိတ်ကုန်တတ်၏။ ၎င်းတို့ကလည်း ဤသူမှာ ဖူးစာအမှန်လောဟု သံသယဝင်ကာ တစ်ပါးသူများနှင့် အပျော်ရှာကြ၏။ အဟိတ်ပင်၏ အစွမ်းသတ္တိ ပျယ်သည်ကြောင့် ပြန်ဆပ် ရမည့်အလှည့့် ရောက်ချေပြီ။
မိမိ၏ဇနီးအား ရိုးမြေကျသည်အထိ ပေါင်းပါ့မည်ဟု သစ္စာပြုသော သူကောင်း တစ်ဦး ရုတ်တရက် ခြံခုန်ခြင်းသည် အဘယ်သို့ရှိစ။ အနှီပုရိသလည်း ထိုသို့ ဖြစ်လို မည် မဟုတ်ငြား မတတ်နိုင်ရှာ။ အချစ်သည်တဏှာနှင့် ရောထွေးကုန်၏။ ၎င်း၏ သစ္စာ စောင့်မှုကို သံသယဝင်တော့၏။ ၎င်းသည်လည်း အချစ်နှင့် မထိုက်တန်တော့ ဟူသည့် စိတ်ဝင်ကာ စိတ်မလုံဖြစ်ကာ မိမိကြင်ဖော်နှင့် ခွာလာတော့၏။ အချစ်ကို ၎င်း၏ နှလုံး သားမှ ဆောက်တည်နိုင်မည်ဟု အထင်ရှိခဲ့ငြား ယခုတွင် မွမွကြေတော့ရာ အိမ်ထောင် ကွဲလေ၏။ သမုတိနယ်သားများက ထိမ်းမြှားခြင်းဖြင့် သုခရှာငြား မတွေ့နိုင်ကြသည်မှာ ဆန်း၏လော။
အိမ်ထောင်သည် သုခ မဖြစ်တော့ဟု ခံစားရသူတိုင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်ထံမှ မြစ်ဖျားခံကြောင်း၊ တောင်းလျှောက်သူတိုင်းလည်း ရရှိကြမည်ကို သတိချပ်ကြပါကုန်။ မိမိ၏ဘဝ လက်တွဲဖော်အပေါ် အချစ််ခန်းနေပြီဟု သင်ခံစားရပါက ဘုရားထံ၌ ထိုအချစ်မျိုးကို ပြန်လည်ခံစားတတ်ရန် တောင်းလျှောက်ကြပါကုန်။ ဘုရား သခင်သည် ကတိပေးခဲ့သည်အတိုင်း ဧကန်ဖြည့်ဆည်းပေးမည် ဖြစ်၏။
အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် သားတော်အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှား တော်မူခြင်းရှိမည် အကြောင်းတည်း။ - (၁၄) သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ တစ်စုံတစ်ခုသောဆုကို တောင်းလျှင်၊ တောင်းသည်အတိုင်း ငါ ပြုမည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄း၁၃၊ ၁၄။
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, (23) gentleness, self-control. Against such there is no law. Galatians 5:22,23
The implications of this text are breathtaking. Let’s analyse it foraminute. All of these attributes come from having the Spirit of God. This simply means that without the Spirit of God you cannot have love, joy, peace, patience, kindness and so on. I was thinking about this Biblical truth one day while I was walking inapark byalake. It was calm and peaceful. I suddenly noticedamother pushing her daughter onaswing. They were both laughing together and obviously enjoying each other’s company. The love that this mother was experiencing for her daughter was inspired by God. The thought to be loving and kind and gentle to her daughter did not originate within the heart of the mother, but in the heart of God, and it was given to that mother who chose to express it, and it becameamother’s love. In this sense it is not really the mother’s love at all, but God’s love expressed through the mother. That love becameapart of the mother because she responded to the Spirit of God and expressed it. In the truest sense, there is no such thing as the love ofamother for her children or love between husband and wife. Does that sound radical? Well this is what the Bible teaches.
I have presented this idea many times when preaching or speaking at seminars and it is interesting to see how the audience responds. Some people’s faces look as if I have just attacked the very foundation of the human race. For all the millions of love songs that have ever been sung and the billions of promises at the marriage altar that “I love you and will love you forever,” not one of those promises can ever be kept without God pouring His love into our receptive souls. Let’s place the attribute of love inaparaglider. Why do so many ‘fall out’ of love and crash to the ground? People who believe that love is originated in our own souls can often wake up in the morning and not ‘feel’ in love with their partners. They begin to doubt whether this relationship is right for them anymore and often begin to look for someone else to bring that feeling back. The Duracell credit card has reached its limit and now it’s time to pay up.
What about the sincere man who really meant his vows to love his wife forever and then suddenly he finds himself attracted to another woman. He may not want to feel this way but he “can’t help it.” Love is confused with lust, and there is doubt as to his integrity. He then begins to withdraw from his partner because the sense of guilt from acting this way prevents him from believing he could still be lovable. He thought he could maintain the flow of love from his heart, but now his paraglider has stalled and comes crashing to the ground from where he launched, and his marriage is over. Is it any wonder that finding joy in marriage is so elusive for most people?
For the sake of those who are feeling like their marriage is not worth it anymore, remember that love originates only in the heart of God and is freely available to those who ask Him for it. If you feel you have lost that love for your partner, ask God to give it back to you. He will, for He has promised.
And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. (14) If you ask anything in My name, I will do it. John 14:13-14